Isa F: Ireo mpiray antoka aminao amin'ny sary nomerika | Famoronana an-tserasera
Isa F: Ireo mpiara-dia aminao amin'ny sary nomerika
Fran Marin | | sary, General
Ny hazavana no singa voalohany ary tsy azo iadian-kevitra amin'ny fizarana sary, ka ny fianarana manodinkodina, mifehy ary mifehy azy dia iray amin'ireo zavatra voalohany tokony ianarantsika hatao. Noho ny fivoaran'ny rafitra sarotra sy mora azo afaka manodinkodina ny jiro isika ary mampifanaraka izany amin'ny filantsika tsy misy ezaka be ary eto no miditra ireo isa F.
Azoko antoka fa efa naheno izany mihoatra ny indray mandeha ianao F-fijanonana na nanontany tena ianao hoe inona ny lojika na ny rohy misy eo amin'ireo soatoavina isa izay miseho ao anaty lantom-pakan-tsary. Tena zavatra tena tsotra izy io ary manondro ny fifehezana na fanodikodinana ny jiro hiasan'ny masinintsika. Manoro hevitra anao aho hijery Ity lahatsoratra ity ary ny hafa momba ny sary anananay izay ao amin'ny bilaoginay satria hanampy anao betsaka hahafantatra ny fiasan'ny fakantsarinao sy ny rafitra anatiny (azonao ampiasaina ny motera fikarohana izay hita eo amin'ny faritra avaratra ambony). Na izany na tsy izany, raha manana fanontaniana ianao dia afaka manoratra hevitra foana amiko.
1 Ka… inona no dikan'ireo isa ireo?
2 Inona no dikan'ny dingana F-Stop?
3 Zava-dehibe ny fiheveranao ...
Ka… inona no dikan'ireo isa ireo?
Fantatsika fa ny diaphragm no singa miandraikitra ny fifehezana ny haben'ny hazavana miditra ao amin'ny masinantsika, ny haavon'ny haavo avoakany, ny hazavana betsaka kokoa dia hisy fiantraikany amin'ny atin'ny fakantsarintsika ary noho izany ny fampahalalana sy nuansa betsaka kokoa dia ampitaina amin'ny alàlan'ny onja maivana.. Azontsika atao ny manatsotra fa ny isa F dia ny solontena na ny rafitra ampiasaina handrefesana ny haavon'ny fanokafana ny diaphragm antsika.
Ny dingana voalohany amin'ny fizotrany dia ny fidirana hazavana ao amin'ilay fitaovana, na izany aza miankina amin'ny maody ny rafitray, ny dingana manaraka dia ny sensor elektronika na ny sarimihetsika ara-batana mivantana. Raha miasa amin'ny maody nomerika isika, ny jiro dia ho refesina ary refesina amin'ny sensor, na izany aza, raha miasa miaraka amin'ny rafitra analog (tsy dia fahita firy tato ho ato), ity fampahalalana ity dia hofakafakain'ny sarimihetsika izay, miankina amin'ny haavon'ny fahatsapany, hahazo vaovao misimisy na latsaka ....
Inona no dikan'ny dingana F-Stop?
Araka ny efa nolazaintsika, afaka miovaova ny sakany fisokafan'ny lavaka izay anaovan'ny jiro mazava (diaphragm). Amin'ny fotoana maro dia mila mampihena an'io toerana io isika ary Amin'ny alàlan'ny isa F dia hampihenanay (na ny santionany) ny habetsaky ny jiro. Mba hampihenana ny habetsaky ny jiro amin'ny antsasany dia tsy maintsy ataontsika ahena ny antsasaky ny faritra ary mitovy amin'ny fanaovan-dingana na fihenan'ny isa F. Midika izany fa afaka manaraka ny fizotran'ny fihodinana isika, izany hoe mampitombo ny savaivony na ny faritra amin'ny alàlan'ny jiro manivana indroa izay antsoina hoe fihenam-bidy. Azontsika atao ny mamerina an'ity dingana ity mandra-pahatongantsika amin'ny fanokafana farany ambony ny tanjontsika, izay fantatra amin'ny anarana hoe fijanonana aotra. Mazava ho azy fa manana ny fototra iorenany sy ny lojika matematika-matematika ao ambadik'izany, saingy azoko tsara fa tsy ilaina ny mitaona azy ireo amin'izao fotoana izao satria afaka manasarotra zavatra mihoatra ny ilaina sy tsy ilaina izany. Hampahatsiahy anao fotsiny izany fa raha ahena ny antsasaky ny faribolana iray na ny boribory roa dia mila zaraintsika ny savaivony amin'ny faka faka 2 = 1.41421356.
Avy eo avelako anao ny sandan'ny isa F tsirairay sy ny fijanonana na ny dingana asehon'izy ireo tsirairay:
fijanonana 0 = f / 1.00000
fijanonana 1 = f / 1.41421
fijanonana 2 = f / 2.00000
fijanonana 3 = f / 2.82842
fijanonana 4 = f / 4.00000
fijanonana 5 = f / 5.65685
fijanonana 6 = f / 8.00000
fijanonana 7 = f / 11.31370
fijanonana 8 = f / 16.00000
fijanonana 9 = f / 22.62741
fijanonana 10 = f / 32.00000
Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny fakantsary dia manome antsika ny fahafaha manokatra sy manidy ny diaphragms manaraka ireo dingana na amin'ny alàlan'ny fitsambikinana 1/3 na 1/2, midika izany fa mamela antsika hanitsy ny habetsaky ny jiro miditra ao amin'ny masontsika misy sisiny izy ireo. izay mandeha eo anelanelan'ny antsasaky ny avo roa heny na kely noho ny antsasaky ny tranga faharoa ity dia hitranga amin'ny fomba miadana kokoa sy miaraka amin'ny nuansa malefaka (dingana).
Zava-dehibe ny fiheveranao ...
Ny isa F dia mari-pamantarana ny haben'ny habaka noforonin'ny diaphragm antsika ary mifehy toy izany ny habetsaky ny hazavana miditra.
Tokony ho fantatsika fa rehefa mahita solontena misy isa isika f amin'ny sora-baventy (F) na sora-baventy (f) miresaka momba ny rafitra fisolo tena samihafa isika. Rehefa mahita isa ambany F isika dia mampitandrina antsika ity tondro ity fa lehibe kokoa ny vavahady ary noho izany dia misy jiro midadasika kokoa miditra; Na izany aza, rehefa mahita isa F lehibe isika dia mampitandrina antsika ny mifanohitra amin'izay, ary midika izany fa varavarana misokatra kokoa, noho izany dia miasa miaraka amin'ny hazavana kely kokoa isika. Ohatra: ny fampiakarana fijanonana feno mankany amin'ny avo F dia manapaka ny antsasaky ny jiro amin'ny antsasany. Ny fampidinana ny fijanonana feno mankany amin'ny ambany F dia mampiakatra ny haben'ny hazavana.
Raha miasa miaraka amina rafitra mizara dingana 1/3 ny maodelin'ny fakantsaranao dia mila mitsambikina telo izahay hahazoana ny vavahady feno na dingana iray manontolo. Raha, etsy ankilany, miasa miaraka amin'ny jumps 1/2 ianao dia tsy maintsy mandray fitsambikinana roa isika mba hahavita dingana iray manontolo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Isa F: Ireo mpiara-dia aminao amin'ny sary nomerika
Juan Dal dia hoy izy:
Tena mahaliana ihany anefa. Raha tsy manontany ny kendrena tondroin'ny lahatsoratra ianao, ny olana maivana sy ny hafa dia mihatsara kokoa noho ny fahombiazana amin'ny fampiasana fandaharana fanovana sary matihanina, raha mbola misy vahaolana tsara ilay sary. Miarahaba anao! Juan Dal
Valiny tamin'i Juan Dal
Drafitra kara-pananahana 20 tany am-boalohany izay nampalaza ny orinasany
7 sarimihetsika nentim-paharazana tsara tarehy, nefa tsy dia fantatra loatra, izay tokony ho hitanao